adidas Dynamic Pulse Body Hair Face Shower Gel 250ml
adidas Ice Dive Body Hair Face Shower Gel 250ml
Adidas Pure Game Body Hair Face Shower Gel 250 ml
Gatsby Hair Wax Set 75g×3. ဖယောင်း gel
ဈေးနှုန်း Ks 12,700
ကျား၊ မ မရွေး။
TROS MEN Deodorant Roll On－Energy Cool
TROS MEN Deodorant Roll On－Energy Cool 25ML×3
TROS MEN Deodorant Roll On - Whitening Protect
TROS MEN Deodorant Roll On - Whitening Protect 25ML×3
TROS MEN Deodorant Roll On -Volcanic 25ML×3 ဂျိုင်းနံ့ပျောက်င်းစေဖို့
TROS MEN Deodorant Roll On - Fresh Protect 25ML×3 ဂျိုင်းနံ့ပျောက်ကင်းစေဖို့
AXE Body Spray You For Man - 150ml
AXE Body Spray Anarchy For Man - 50ml × 3
AXE Body Spray Click For Man - 50ml × 3
AXE Body Spray Provake For Man - 50ml × 3
AXE Body Spray Gold Temptation For Man - 50ml × 3
AXE Body Spray Black For Man - 50ml × 3
VOODOO CLEOPATRA အသားဖြူဆပ်ပြာ 70g
Revolt traditional soap which has properties to reduce the rash, reduce allergy caused by cosmetics and residues on the face, clean the facial skin deeply without dry, and provide moisture and gentle for the skin by selected many kinds of natural extracts. This helps to the whitening skin without acne, eliminate all clogging deeply, detox facial skin and add essential minerals to your skin. Your skin is clean and clear skin without acne and impurities.
VOODOO CLEOPATRA COOLING HERBAL SOAP 70g
This soap is an exclusive cold property formula of Voodoo only. This soap is included value herbs from ancient mythology. Egyptians used the herbs as beauty medicine. It is served to addacharm for the skin.
Caring Set Matt Hair Wax - 70g×2
Suitable for all kinds of hair. ဆံပင်သားအမျိုးအစားအားလုံးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ Matt ဖြစ်သောကြောင့် ပုံသွင်းထားသည်မှာ လွယ်လွယ်နဲ့ ပျက်သွားမှာ မဟုတ်လို့ ဆံပင်ပုံပျက်မှာ စိုးရိမ်စရာမလိုဘူးနော်။ ကျား၊မ မရွေး အသုံးပြုနိုင်သည်။
Caring Spray Net Hair Spray - 220ML×2
Suitable for all kinds of hair. ဆံပင်သား အမျိုးအစား အားလုံးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ဆံပင် ပုံသွင်းထားသည်ကို ကြာရှည်ခံအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ကျား၊မ မရွေး အသုံးပြုနိုင်သည်။
အနီရောင် အပြာရောင် Set
Caring Hair Styling Mousse With Hair Conditioner
အရည်ပြည့်ပြည့် ဆံပင်ပုံသွင်းဆေး၊ ဆံပင်ပျော့ဆေး ပါဝင်သောကြောင့် အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ အဆင်ပြေပြီး လွယ်ကူစွာပုံဖော်နိုင်မှာပါ။ ကျား၊ မ မရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
moisturizer D-Panthenol Set
Caring Hair Styling Gel - 180ML×2
Suitable for all kinds of hair. ဆံပင်သား အမျိုးအစား အားလုံးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ပုံဖော်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ဆံပင် ပျက်စီးခြင်းရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျား၊ မ မရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Caring Spray Net Hair Spray - 120ML×2
Suitable for all kinds of hair. ဆံပင်သား အမျိုးအစား အားလုံးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ဆံပင် ပုံသွင်းထားသည်ကို ကြာရှည်ခံအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ကျား၊ မ မရွေး အသုံးပြုနိုင်သည်။
Gatsby Hair Wax Set 25g×6
ဈေးနှုန်း Ks 10,600
Gatsby Hair Wax Ultimate & Shaggy 75g×3
ဆံပင်ပုံသွင်းဂျဲလ်၊ တာရှည်ခံသောကြောင့် လွယ်လွယ်နဲ့ ပုံပျက်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျား၊မ မရွေး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Gatsby Hair Wax Ultimate & Shaggy 25g×6